Arsenal Oo Cadhadii Watford Kula Dhacday Kooxda Eintracht Frankfurt Iyo Xidigo Da’yar Ah Oo Si Layaableh Isku Muujiyay. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 19, 2019 at 19:51 Arsenal Oo Cadhadii Watford Kula Dhacday Kooxda Eintracht Frankfurt Iyo Xidigo Da’yar Ah Oo Si Layaableh Isku Muujiyay.2019-09-19T19:51:00+01:00 CAYAARAHA
Arsenal ayaa guul muhiim ah ka soo gaadhay kooxda Eintracht Frankfurt kulankeedii ugu horeeyay ee Europa League waxaana Gunners guushan ku soo hogaamiyay Joe Willock ,Bukayo Saka iyo Aubameyang oo min hal gool dhaliyay.
Arsenal ayaa guul wayn oo 3-0 ah ka soo gaadhay kooxda Frankfurt waxayna ahayd guul ay kooxda Unai Emery iskaga reebtay ceebtii kulankii Watford ee ay labada gool iska khasaariyeen.
Da’yarka Bukayo Saka oo goolkiisii ugu horeeyay ee Arsenal si cajiib ah u dhaliyay ayaa ku lug yeeshay saddexda gool ee ay Gunners guusha ku soo gaadhay.
Arsenal oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay guuldaro ku soo gaadhay finalkii Europa league ayaa markale bilaabtay tartanka kooxaha Yurub ee labaad si ay markale iskugu dayaan in ay koobkan ku guulaystaan isla markaana ay Champions League ugu soo laaban karaan.
Arsenal ayaa marti u ahayd kooxda Eintracht Frankfurt kulanka furitaanka heerka groupyada Europa League, Unai Emery ayaa isbadal badan ku sameeyay shaxda kooxdiisa laakiin waxa uu doonayay in ay guul soo gaadhaan si ay qaab fiican ugu bilawdaan tartankan.
Arsenal ayaa goolkeeda furitaanka heshay daqiiqadii 38 aad waxaana goolkan u saxiixay da’yarka Joe Willock oo waliba caawin ka helay da’yarka uu Emery kulankan fursada wayn siiyay ee Bukayo Saka, wuxuuna ahaa gool musiibo ku noqday kooxda martida loo ahaa ee Frankfurt.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayayna Arsenal iyo Frankfurt awoodin in ay wax goolal kale ah dhaliyaan, waxaana lagu kala nastay 1-0 ay Arsenal guul ugu taagnayd.
Qaybtii labaad ee ciyaarta waxa uu Emery ciyaarta soo galiyay Nicolas Pepe iyo Dani Ceballos halka uu saaray da’yarka goolka dhaliyay ee Joe Willock waxaana sidoo kale la saaray Smith Rowe. Waxa kale oo uu Emery ciyaarta soo galiyay Maitland-Niles halka uu badalay S. Kolašinac.
Xaalada kooxda Eintracht Frankfurt ayaa sii xumaatay daqiiqadii 79 aad kadib markii kaadhka cas loo taagay Dominik Kohr oo laba kaadh oo digniin ah ciyaarta ku qaatay, waxayna arintani sii xoojisay dadaalkii ay Gunners ciyaarta guusheeda ugu taagnayd.
Daqiiqadii 85 aad Arsenal ayaa keensaday goolkeeda labaad waxaana gool qurux badan u saxiixay da’yarka kulankan sida cajiibka ah iskugu muujiyay ee Bukayo Saka kaas oo caawin ka helay Pepe oo ciyaarta badal ku soo galay.
Ciyaarta ayaa noqotay 2-0 ay Arsenal ku xaqiijisatay guusha balse ay wali sii waday in ay goolal kale raadiso maadaama oo ay kooxda Frankfurt ciyaartoy lumisay kadib casaankii la siiyay Kohr.
Daqiiqadii 87 aad Arsenal ayaa goolkeeda saddexaad ku soo ceebaysay kooxda martida loo ahaa ee Frankfurt kadib markii uu Aubameyang dhamaystiray kubbad caawintii labaad ee uu kulankan ka sameeyay Bukayo Saka.
Bukayo Saka ayaa ku lug yeeshay saddexda gool ee ay kooxdiisu dhalisay isaga oo laba gool caawintooda sameeyay isla markaana goolka kale raacsaday.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Arsenal ku soo dubatay toban ciyaartoy oo kooxda Frankfurt ah waxayna Gunners ka soo kabsatay niyadjabkii ay Watford kala kulmeen kulankii Premier League ugu danbeeyay.
« Arsenal oo guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Eintracht Frankfurt … +SAWIRRO
Somalia: About 5,000 Sufi fighters join army »